China Galvanized welded wire fefy ho an'ny fambolena sy ny indostria Mpanamboatra sy mpamatsy | Pro Fefy
Fefy tariby nohamafisiny ho an'ny fambolena sy ny fampiharana indostrialy
Fefy tariby nohamafisiny no namboarina ho an'ireo tetikasa ireo dia voafetra ny tetibola fa mila fefy matanjaka be. Ampiasaina betsaka amin'ny fambolena sy indostrialy izy io noho ny vidiny lafo.
Ny fizotry ny famokarana fefy vy tariby nohomboina dia tsotra kokoa noho ny fefy vy hafa. Voalohany, mampiasa tariby vy mifangaro vy ary faharoa vita amin'ny fantsom-boalavo mafana fa tsy amin'ny alàlan'ny famolahana. Ho fitsinjovana ny vidiny, dia volavolanay ity tontonana harato ity fa tsy misy paositra miendrika L miolakolaka sy tsotra miangona. Fa ny savaivon'ny tariby aorian'ny fanosotra vita amin'ny galvanized dia mety ho 4mm ary ny zinc mifono dia hatramin'ny 450μ / mg noho izany dia tanjaka avo sy fefy matevina tariby maharitra izy io.
PRO.Fence dia manome fefy tariby nohomboina tamin'ny haavo maro samihafa, savaivony tariby ary elanelam-bidy mifanaraka amin'ny tinady. Raha ampitahaina amin'ireo mpifaninana hafa dia manana tombony amin'ny firakotra zinc mamiratra sy feno tsy misy residu zinc. Izany dia hanatsara ny fanoherana ny harafesina ary hanitatra ny vanim-potoana fampiasana.
Safidy tsara indrindra raha mitady fefy avo lenta sy vidiny ambany ho an'ny tetikasanao. Ireo mpanjifanay maro an'isa dia mampiasa azy io ho toy ny fefy fiarovana ny toby famokarana herinaratra, valan-javaboary, toeram-piompiana sns.
Harato: 100 × 100mm
Haben'ny tontonana: H500-2500mm × W2000-2500mm
Paositra: 40 × 40 × 2.5mm
Vita: nandroboka mafana
Item TSY: PRO-05 Fotoana fitarihana: 15-21 ANDRO Orginan'ny vokatra: CHINA
Teo aloha: Fambolena fiompiana omby, ondry, serfa, soavaly
Manaraka: M-fefy Galvanized Welded Mesh Fence (Paingotra iray) ho an'ny fambolena masoandro